Liam Cunningham – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
How to download (For Android App)
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) Unicode ဂကျြလီအားဖွညျ့ပါဝငျထားပွီး ရှကေ့ Mummy နှဈကားရဲ့အဆကျအနနေဲ့ထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါ။ စှနျ့စားရှာဖှသေူ အိုကောနယျနဲ့သားဖွဈသူတို့ဟာ အသကျပွနျရှငျလာတဲ့ ဟနျဘုရငျရဲ့ လကျစားခမြေဲ့အစီအစဉျတှကေို ရပျတနျ့ဖို့ကွိုးစားကွပါတယျ။ ရကျစကျကွမျးကွုတျတဲ့ ဟနျဘုရငျဟာ လူသားမြိုးနှယျတခုလုံးကို ကြှနျပွုဖို့ကွံစညျနတောဖွဈပါတယျ…ဒါပမေဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ2000က မှျောဆရာမတဦးရဲ့ ကယျတငျမှု့ကွောငျ့ ဟနျဘုရငျနဲ့သူ့တပျတခုလုံးဟာ ရှံ့ရုပျတုမြားအသှငျပွောငျးခဲ့ပါတယျ အခုအသကျပွနျဝငျလာတာကွောငျ့ ဟနျဘုရငျဟာ ဒီအစီအစဉျကို ပွနျအသကျသှငျးနပေါတယျ…ရဈချနဲ့သားတျောမောငျအဲလကျဈရောဟာ သဘာဝလှနျကိစ်စမြားနဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတာကွောငျ့ အကွောကျအလနျ့မရှိတဲ့မိသားစုနဲ့ဟနျဘုရငျစဈတပျတို့ ဘယျလိုကွုံတှမေ့ယျဆိုတာ…။ Credit Review Zawgyi ဂျက်လီအားဖြည့်ပါဝင်ထားပြီး ရှေ့က Mummy နှစ်ကားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါ။ စွန့် စားရှာဖွေသူ အိုကောနယ်နဲ့ သားဖြစ်သူတို့ ဟာ အသက်ပြန်ရှင်လာတဲ့ ဟန်ဘုရင်ရဲ့ လက်စားချေမဲ့အစီအစဉ်တွေကို ရပ်တန့် ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဟန်ဘုရင်ဟာ လူသားမျိုးနွယ်တခုလုံးကို ကျွန်ပြုဖို့ ကြံစည်နေတာဖြစ်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်2000က မှော်ဆရာမတဦးရဲ့ ကယ်တင်မှု့ ကြောင့် ဟန်ဘုရင်နဲ့ သူ့ တပ်တခုလုံးဟာ ရွံ့ ရုပ်တုများအသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ် အခုအသက်ပြန်ဝင်လာတာကြောင့် ဟန်ဘုရင်ဟာ ဒီအစီအစဉ်ကို ပြန်အသက်သွင်းနေပါတယ်…ရစ်ခ်နဲ့ သားတော်မောင်အဲလက်စ်ရောဟာ သဘာဝလွန်ကိစ္စများနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အကြောက်အလန့် မရှိတဲ့မိသားစုနဲ့ ဟန်ဘုရင်စစ်တပ်တို့...
IMDB: 5.2/10 143,322 votes
Clash of the Titans (2010) လူတွေပြောနေကြတဲ့ အစောဆုံးပုံပြင်တွေက ကြယ်တွေထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ .. လူနဲ့ နတ်ဘုရားတွေမပေါ်ခင် ကမ္ဘာကြီးကို တိုင်တန်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့တိုင်တန်တွေက တန်ခိုးကြီးတယ်... ဒါပေမယ့် တိုက်တန်တွေဟာ သူတို့ရဲ့သားတွေကြောင့်ပဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်. သူတို့ကတော့ ဇူးစ် ပဆိုက်ဒန် နဲ့ ဟေဒီစ် တို့ပါ ဇူးစ် ကသူ့မိဘတွေကို ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ အလွန်သန်မာတဲ့ သားရဲတစ်ကောင် သူ့ညီ ဟေဒီစ် ကို ဖန်ဆင်းခိုင်းတယ်..ဟေဒီစ် က သူ့ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ စကားမပြောနိုင်တဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ခရာတန် ကို မွေးဖွားခဲ့တယ်.. ဇူးစ်က ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်သွားတယ်.. ပဆိုက်ဒန်က ပင်လယ်တွေရဲ့ ဘုရင်..ဟေဒီစ် ကတော့ ဇူးစ်ရဲ့ လှည့်စားမှုကိုခံရပြီး.. အမှောင်(အပ)လောက ကိုသာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်.. လူတွေကို ဖန်ဆင်းသူက ဇူးစ် ဖြစ်ပြီး လူတွေက နတ်တွေ ထာဝရ ရှင်သန်ဖို့ ပူဇော်ပသ ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လူသားမျိုးနွယ်က အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးထွားလာပြီး.. နတ်ဘုရားတွေကို မေးခွန်းထုတ်လာကြတယ်..နောက်ဆုံးမှာတော့ နတ်ဘုရားတွေကို ...
IMDB: 5.8/10 254,525 votes
24 Hours to Live (2017) မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးပါရစေဒီမေးခွန်းက သိပ်ကိုရိုးရှင်းပေမဲ့ တကယ်တမ်းပြန်ဖြေဖို့ရယ် လက်တွေ့လုပ်ဖို့ရယ်က မရိုးရှင်းတော့ဘူး မေးခွန်းလေးကတော့……သင့်ရဲ့ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၂၄နာရီပဲ ရှိတော့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ….ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ အဓိက နဲ့ သာမညဆိုတာ ဘယ်လိုခွဲမလဲဒီကားက ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတယ် သူဟာ ကြေးစားပီပီ ထက်မြက်တယ် တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကျွမ်းကျင်တယ် တစ်နေ့တော့ ကြေးစားအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ တစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကြောင့် သူသေဆုံးသွားတယ် ဒါပေမဲ့ ဆန်းကြယ်တာကသူ့အလုပ်ရှင်က သူ့ကို အသက် ၂၄ နာရီပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်…. ကဲ သူဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ… ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်မလဲ ….. Review Credit
IMDB: 5.7/10 9,500 votes
Action & Adventure 34
Science Fiction 151
Super Hero 51
M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website © 2021 All rights reserved ©2018 All rights reserved Disclaimer: Cinema.msubmovie.com is not in anyway associated with Gostream.is, Onlinemovies, Fmovies, Xmovies8, Putlocker sites. We do not host any videos on Cinema.msubmovie.com itself. Cinema.msubmovie.com is absolutely legal and contains only links to other third party websites like Youtube, Uptobox, Mediafire, Google, Picasaweb, Dailymotion, Openload, VK.com and many more which actually host videos. Cinema.msubmovie.com is not responsible for the compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or linked hosting websites. Cinema.msubmovie.com only and only provides links to third party video hosting sites which videos are uploaded by third party users. Cinema.msubmovie.com in no way affiliated with them nor intend to do that.